Raha eo amin'ny fifandraisana ianao fa manana fahatsapana ho an'ny hafa, ataovy izany - Fifandraisana
Raha eo amin'ny fifandraisana ianao fa manana fahatsapana ho an'ny hafa, ataovy izany
Mifandray ianao. Mety maharitra ny iray.
Ary na izany aza, tato ho ato dia nisy olon-kafa tao an-tsainao.
Nahatonga fahatsapana ho an'ny olona tsy vadinao ianao.
Ary sahirana ianao mamantatra izay tokony hataonao momba izany.
Ny lesoka dia, ny fahatsapanao dia nitombo samirery, ary vao mainka nahagaga anao.
Heveriko fa tsy nivoaka niniana nitady olona vaovao ianao. Raha nanao izany ianao dia kettle trondro hafa tanteraka izany.
Angamba mandeha tsara ny fifandraisanareo, na angamba namakivaky fehikibo sarotra…
Na izany na tsy izany dia hitanao fa tao anaty toe-javatra sarotra ianao, ary angamba ianao somary misavoritaka be amin'ireo fanontaniana be dia be ao an-tsainao.
Inona no dikan'ireo fahatsapana ireo amin'ny fifandraisanareo?
Azo atao ve ny mahatsapa olona roa indray mandeha?
Fa maninona ianao no mety mahatsapa toy izany?
Ary inona no tokony hataonao amin'izany?
Toe-javatra misavoritaka tokoa ny tokony hitranga, koa ndao hofongarantsika tsikelikely.
Voalohany, hanana fotoana hitrandrahana izay tsapanao ianao.
Avy eo, handalina lalindalina kokoa isika ary hieritreritra hoe avy aiza ireo fahatsapana ireo.
Ary farany, izahay dia hieritreritra ny mety ho dikan'ireo fahatsapana ireo amin'ny fifandraisanareo sy ny fomba tokony hanombohanao mandroso mandroso eto.
Ny tsirairay amin'ireo dingana telo ireo dia ho mora kokoa aminao noho ny fanampian'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana. Ny fananana olona tsy miandany tanteraka hiresahana sy hahazoana hevitra manokana sy torohevitra manokana momba ny toe-javatra misy anao dia ho tsara kokoa noho ny mandeha irery. Tena mamporisika ny serivisy an-tserasera izahay. Azonao atao ny miresaka amin'ny olona iray ao amin'ny tranon'ny tranonao manokana (na any an-toeran-kafa raha miara-mipetraka aminao ianao) amin'ny fotoana iray mifanaraka aminao. hifandray amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana izao.
Dingana voalohany: mijery ny zavatra tsapanao.
Fantatrao fa nahazo zavatra tsapanao io olona io. Saingy, raha ao anaty fifandraisana ianao dia angamba manafina ireo fahatsapana ireo fa tsy manatrika azy ireo sy mandinika azy ireo.
Sarotra izany, tonga ny fotoana hamoahana ny fihetseham-ponao.
Esory izy ireo hiala ao amin'ilay boaty nanafenanao azy ireo ary diniho izay tena toetran'ireo fahatsapana ireo.
Mametraha fanontaniana toy ny:
- Fahasarotana ara-nofo ve izany?
- Ianao ve miaina filan-dratsy amin'ity olona ity ?
- Maniry fifandraisana ara-batana amin'izy ireo ve ianao?
- Ny toetrany ve no mahasarika anao?
- Ankafizinao ve ny fiarahan'izy ireo?
- Mampihomehy anao ve izy ireo?
- Te handany fotoana miaraka amin'izy ireo ve ianao?
- Te hahafantatra ny heviny momba ny zavatra ve ianao?
- Raha manao ny marina tanteraka ianao, afaka mahita ny tenanao amin'ny fifandraisana maharitra amin'ity olona ity ve ianao?
Dingana faharoa: ny fahazoana ny fototry ny fahatsapanao.
Marina, noho izany dia nandany fotoana ianao hamaritana ny toetran'ny fahatsapanao an'ity olona ity, fotoana tokony hieritreretana hoe avy aiza izy ireo.
Misy lafiny telo lehibe tokony hodinihinao: vokatry ny tenan'ilay olona ve izy ireo, vokatry ny fifandraisana misy anao izao ve, sa mankany amin'ny zavatra mitranga aminao daholo izy ireo, ary tsy misy ifandraisany amin'izany olona sa ny vadinao mihitsy?
Andao hodinihintsika akaiky kokoa ireo.
1. Tianao izy ireo ho azy ireo.
Mety mandeha tsara ny fifandraisanareo. Faly sy afa-po amin'ny mpiara-miasa aminao ianao, ary tena maniry ny hanorina hatrany ny fiainanao miaraka amin'izy ireo.
Amin'ity tranga ity, raha nihaona tamina olona iray tianao ianao, dia mety hidina tanteraka amin'ilay fifandraisana misy anao amin'ilay olona manokana io.
Tsy voatery hitady antony mahatonga anao foana ianao. Mety ho tsotra toy ny fanekena fa manintona azy ireo ianao amin'ny maha izy azy.
Diniho tsara raha tena misy izany. Raha heverinao fa izany dia azonao atao ve ny mametraka ny rantsan-tànanao amin'izay momba azy ireo izay mampiavaka azy manokana?
mahatsiaro tena ho olon-dratsy aho
Fa maninona izy ireo no nahazo, indrindra, fa nahasarika ny masonao izany?
Mety tsy ho vitanao ny mametaka azy amin'ny teny, saingy tokony ho hitanao raha tena zavatra miavaka izy ireo.
2. Ny fifandraisanareo dia mandalo fantsona be vato.
Mazava ho azy, indraindray misy antony miteraka amin'ny endrika olana amin'ny fifandraisana misy anao.
Ny fahatsapana izay novolavolanao ho an'ny olon-kafa dia mety tsy dia misy ifandraisany amin'ilay olona tsapanao fa miaraka aminy inona no tsy ampy amin'ny fifandraisana misy anao.
Angamba ianao maniry faniriana ara-batana.
Angamba ianao maniry faniriana mafy ara-pientanam-po.
Mety mahatsapa ianao fa tsy raharahaina, tsy tiana, tsy takatra, ary nanomboka nitady tany an-kafa ho an'ny olona mety hanome anao ireo zavatra tsy ananan'ny vadinao.
Rehefa misy mahatsapa toy izany dia mety ho mora ny manomboka mahatsapa fihetseham-po amin'ny olon-kafa.
Ireo fahatsapana ireo dia tsy voatery ho valin'ny olona niavaka manokana, fa noho ianao mitady olona, ​​na iza na iza, mba hipetaka.
Amin'ny tranga toy itony dia mila esorinao ilay olona nampivoarinao fahatsapana ary afindrao amin'ny fifandraisanao izany.
3. Nahazo zavatra sasantsasany ilainao hiasa ianao.
Raha mitady any an-kafa ianao dia aza mihevitra foana fa ny fifandraisana misy anao no olana.
maninona no tsy hanontany ahy izy raha tiany aho
Mety hoe manana olana manokana ianao ka midika fa sarotra aminao ny miaraka amina fiarahana ary mety manandrana mandoto tena aza.
Angamba manana olana ianao fanoloran-tena , na fifandraisana akaiky
Angamba manantena zavatra be loatra amin'ny namana ianao ary manomboka mitady any an-kafa rehefa tsy mahatratra ny antenainao tsy ampoizina ny vadinao.
Makà fotoana kely handinihana raha mety misy zavatra ao aminao ilainao tokony halamina izay nanjary nahatonga ireo fahatsapana ireo hivoatra.
Dingana fahatelo: mandroso.
Azoko antoka fa tsy mila milaza aminao aho fa tsy maharitra ity toe-javatra ity.
Rehefa dinihina tokoa, raha mamaky ity lahatsoratra ity ianao, ny fahatsapana iainanao dia mety ho kely kokoa noho ny faniriana mandalo fotsiny.
Ka, izao ny fotoana handinihana ny fomba handrosoanao amin'ny toe-javatra.
Raha manapa-kevitra ny hitady ny fihetseham-ponao ianao.
Mety hanapa-kevitra ianao fa tena misy ny fahatsapanao an'ity olona ity.
Tsy mila milaza izany aminao aho, fa tsy afaka manao na inona na inona momba ireo fahatsapana ireo ianao raha mbola ao anaty fifandraisana.
Mety halaim-panahy ny mitady fanamafisana avy amin'ny tanjon'ny fitiavanao fa hamaly izy ireo alohan'ny hisarahanao amin'ny namanao, saingy tsy rariny amin'ny olona izany.
Ianao dia mila atsaharo ny fifandraisana misy anao izao alohan'ny hanapahanao hevitra ny hifindra amin'ilay olona tianao dia fantaro tanteraka fa mety handà anao ilay olona voalaza.
Amin'ny fanaovana an'io dia fantatrao fa ny fahatsapanao an'ity olona ity dia matanjaka tsara hanapotika ny fifandraisanareo.
Mety ho fiandohan'ny zavatra mahafinaritra izany, saingy mila mailo ianao fa hisy aretin-tsaina maro amin'izany.
Raha manapa-kevitra ny hijanona amin'ny vadinao ianao.
Etsy ankilany, mety manapa-kevitra ianao fa manokana ny zavatra azonao tamin'ny vadinao, ary te hijanona miaraka aminy ianao.
Amin'izay dia mila manisy tsipika eo ambanin'ny fahatsapanao an'ity olona ity ianao.
Fanapahan-kevitrao izany raha mahatsapa ianao na mila milaza amin'ny vadinao momba ny fahatsapana efa azonao.
Misy ny fifandirana ho an'ny hetsika roa, fa miankina aminao ihany izany, raha toa ka tsy nisy na inona na inona nitranga teo aminao sy ilay olona izay tsapanao.
Raha nisy zavatra nitranga, dia mila manao ny marina amin'ny vadinao ianao momba an'io.
Fa raha ny fahatsapana fotsiny avy taminao, ary tsy misy hafa, azonao atao ny manapa-kevitra raha hilaza amin'ny vadinao na tsia.
Raha heverinao fa vokatry ny olana teo amin'ny fifandraisanareo izy ireo dia mety ho fantatry ny olon-tianao izay noeritreretinao sy tsapanao mba hahafahanareo roa manapa-kevitra ny hiasa amin'ireo olana ireo ary handroso miaraka.
Hamarino tsara fa misafidy fotoana mety ianao hanaovana an'io resaka io, rehefa samy misakafo tsara ianao, miala sasatra tsara ary mahonon-tena.
Amin'ny ankapobeny, ny feon'ny fieritreretanao dia hampahafantatra anao foana raha resaka tokony hatao io.
Raha tsapanao fa io dia vokatry ny olana manokana misy ifotony, dia mila mandray fepetra mavitrika ianao hiasa amin'izy ireo, mba tsy hiverenan'ity karazana zavatra ity intsony.
Na izany na tsy izany, amin'ny tontolo mety indrindra dia hatsahanao ny fifandraisana amin'ny olona efa nahatsapanao.
Tsy hita, tsy misy saina.
Rehefa dinihina tokoa, raha matotra ianao amin'ny handrosoana amin'ny fifandraisanao, ny fifandraisana amin'ity olona ity dia mety hahatonga ny raharaha ho sarotra.
Saingy, mazava ho azy, tsy miaina amin'ny tontolo mety loatra isika, ka mety olona tsy afa-mandositra ianao. Angamba olona iray iarahanao na mahita be dia be amin'ny antony maro.
Amin'izay dia mila manana ny herin'ny sainao ianao vao afaka apetraho eo anilanao ny fihetseham-ponao.
Mbola azonao atao ny mampihena ny fotoana laninao amin'ny fifampiresahana amin'izy ireo sy hifehezana ny natioran'ireny fifandraisana ireny.
Tsy misy valiny marina.
Raha nahita ny tenanao tamina toe-javatra toy izao ianao, ny lakileny dia ny mahitsy fo amin'ny tenanao, ary alao antoka fa manao izay rehetra azonao atao ianao mba hahazoana antoka fa tsy misy olona maratra (mihoatra ny ilaina).
Sarotra ny fitetezana ny toe-javatra toy itony, fa raha mbola marina ianao, miahy ary aza mamela ny tenanao ho voatarika amin'ny fihetseham-ponao alohan'ny hahalalanao ny tena dikan'izy ireo dia tokony ho lasa ny hetsika tsara indrindra mazava
Mbola tsy azonao antoka izay hatao momba ny fihetseham-ponao amin'ity olon-kafa ity?Fa maninona no hijaly irery amin'ity toe-javatra sarotra ity? Aleo kosa miresaka amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana voaofana izay hihaino anao ary hitarika anao amin'izay mety ho vokatra mety indrindra aminao. Indraindray dia manampy fotsiny ny miresaka zavatra mba hahatsapanao ny fahatsapanao tena marina amin'ny toe-javatra iray.Ka mifampiresaha amin'ny Internet amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hamantatra ny zavatra rehetra. Tsotra.
Famantarana 14 momba ny raharaham-pihetseham-po (+ 11 Antony Misy An'ireo ny olona)
Antony 4 maninona no mitandrina anao ny fitazonana tsiambaratelo amin'ny fifandraisana
25 Tsy misy Bullsh * t manamarika ny fifandraisanareo efa vita
Raha te-hahatsapa ho tiana kokoa ianao ary tadiavina amin'ny fifandraisanao dia ataovy ireto zavatra 10 ireto
Ahoana ny fomba hisafidianana lehilahy roa: fomba 11 hanaovana fanapahan-kevitra tsara
milaza amin'ny olona tianao izy nefa tsy milaza izany
Alice in Wonderland dia manonona izay tsara indrindra rehetra ao
nanao zavatra tsy nety aho ary mahatsapa ho ratsy
ambany taker vs hulk hogan
rehefa misy mametraka anao eo ambany olona
i randy orton dia miditra ao amin'ny fianakavian'i wyatt
famantarana ny mpampiasa amin'ny fifandraisana